Doorasha AQalka Hoose ee Gobolada waqooyi oo maanta gacanta leysula tegey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Doorasha AQalka Hoose ee Gobolada waqooyi oo maanta gacanta leysula tegey.
Doorashada xubnaha aqalka hoose ee maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhashay buuq iyo qalalaase, kadib markii ay gacanta iskula tageen qaar ka mid ergada.
Intii ay soctay doorashad ayaa waxaa gacanta iskula tagay ergo ku sugneyd xarunta Gaadiidka Booliska oo ay ka socoto doorashada, waxaana shaqsiyaadka gacanta iskula tagay ka mid ahaayeen ergadii dooran laheyn musharixiinta kala ah Qadro Axmed Ibraahim, Guuleed Ceydurus Cige, Canab Xasan Kaahin iyo Shugri Cabdi Yuusuf oo dhmaantood ku tartamayay hal kursiga oo kaliya.
Xubnaha gacan ka hadalka bilaabay ayaa la sheegay in taageerayaal u ahaayeen Qadro Axmed Ibraahim oo aan waqtigaa goobta ku sugneyn, hasse ahaatee waxaa markii danbe dibada uga saaray xarunta ciidamada ammniga.
Ugu danbeyntii, siddoo kale waxaa maanta la doortay labo xildhibaan oo kala ah C/raxmaan Max’uud Caateeye 49 cod iyo Sakariye Xuseen Aar.
Previous articleMid kamid ahaa Askarta Amisom oo Al-shabaab Qaarijiyeen muddo markii ay nolol ku hayeen.
Next articleUrurka Midawga Yurub oo Soomaaliya ugu baaqey in laga gudbo caqabadaha jira.